Ukukhiqizwa kwe-Ultrasonic Kwama-Inks Ethambile Kusilinganiso Esikhulu - I-Hielscher Ultrasound Technology
I-nanoparticles ehlakazekile ngokungafani nesiliva noma i-graphene enezinga elilinganiselwe elincani lezinhlayiyana zibalulekile ekukhiqizeni ama-inks ayenzayo.
Abahlakazeli be-ultrasonic abanamandla bavumela ukuhlanganisa, ukuguqula nokusabalalisa izakhi (isib. Ag), isisekelo sekhabhoni (isib. CNTs, graphene) nanoparticles kanye nama-nanocomposites ane-conductivity enhle kagesi.
Abahlakazeli be-ultrasonic ba-Hielscher baqinisekisa ukukhishwa kwekhwalithi ephezulu, kuyilapho bephumelela kakhulu, bethembekile, futhi bebiza imali.
Ultrasonic Ukuhlakazeka kokuqhutshwa kweNanoparticles
Inki yokuqhuba ine – njengoba igama layo libonisa – ukusebenza kwe-conductivity kagesi. Ukuze ulungise ama-inks asebenzayo kanye nezingubo zokugqoka, izingxenye ezenza ugesi (ukugcwalisa okuqhutshwayo) kufanele zibe yifomu efanayo ehlakazeka kwi-inki base. Nanoparticles ezifana isiliva, ithusi, I-CNTs, I-Graphene, i-graphite, nezinye izinhlayiya ezenziwe ngensimbi kanye nanocomposites zibandakanya ukuqhuba okusezingeni.
Amaprosesa ase-Ultrasonic akha amandla amakhulu okugcoba kakhulu, lapho amandla ka-van der Waals kanye nezibopho zamangqamuzana zinganqotshwa. ultrasonic Ukuhlakazwa iyindlela yokukhetha yokusabalalisa ama-nanoparticles, ngoba i-sonication inikeza ukusatshalaliswa kwesayizi okusanhlamvu kakhulu, ukusebenza kwezinhlayiyana eziphezulu kanye nemiphumela yokukhiqiza.
Ukukhiqizwa kwe-Ultrasonic kwe:
Ama-inks we-Graphene (anezinhlawulo eziphezulu kakhulu ze-graphene)
Izinhlayiya ze-Copper (nanowires ne-nanoparticles)
izingqikithi eziningi ze-nano-composites
Ultrasonic Ukuhlakazeka kwe-Dielectric Nanoparticles
Ukuze unike izakhiwo zokuzivikela zibe yizinhlanganisela, izinhlayiya ze-dielectric njenge-SiO2, I-ZnO, i-alumina-epoxy nanocomposites phakathi kwamanye kumele ihlakazeke ngokufanayo njengoba izinhlayiya ezilodwa zingena ematrix. Ukuhlakazeka kwe-ultrasonic kuqinisekisa ukuthi ama-agglomerate aphukile ukuze ama-nanoparticles ahlakazeke kahle. Ukusabalalisa okuncane kakhulu kwezinhlayiyana kubalulekile ukuthola umsebenzi othembekile we-dielectric of the material.
Ama-ultrasonicators e-Hielscher's High-Power
Amasistimu ama-ultrasonic anamandla aqinisekisa ukusabalalisa okuthembekile kwama-nanoparticles – kwilebhu nasezingeni eliphezulu lezinga lesikhulu kuze kube sezingeni eligcwele lezimboni. uma kuqhathaniswa nabanye abahlinzeki be-ultrasonic, uhlelo lwe-ultrasonic lwe-Hielscher luyakwazi ukuletha Amaplitudes aphezulu kakhulu afika ku-200μm – qhubeka ngokusebenza ngo-24/7 nokusebenza ngendlela elula ye-sonotrode. Uma uhlelo lokusebenza ludinga ama-amplitudes aphakeme nakakhulu noma / noma izinga lokushisa eliphakeme kakhulu, i-Hielscher inikeza nge-ultraotic ultrasonic sonotrodes, engakwazi ukuletha ama-amplitudes> 200μm futhi afakwe ezindaweni ezishisayo (isb. insimbi iyancibilika). Ukuqina kwama-ultrasound ultrasonic imishini yama-industrial efrijini. Yonke imishini yethu yakhiwe 24/7 ukusebenza ku umsebenzi onzima futhi ekudingeni izindawo.
I-Ultrasonicator UP200St (200W) isabalalisa i-carbon black emanzini isebenzisa i-1% wt Tween80 njenge-surfactant
usayizi wezinhlayiyana ezilinganayo
Imithwalo yezinhlayiyana eziphezulu
ephansi kuya kuma viscosities aphezulu
Iprosesa ye-Industrial ultrasonic UIP16000 (16kW) ukukhiqizwa kwama-inks eziphathekayo
Ama-Nano-Fuels aphezulu ngokuhlakazeka kwe-Ultrasonic
Ukusakazeka kwe-Ultrasonic kwe-Silica (SiO2)
Electrical Conductive Nanoparticles
I-Nanoparticles (NPs) inikeza izici zezinto eziyingqayizivele, ezingase zihluke ngokuphawulekayo ezivela kubuningi bobuciko bokuqukethwe. Ama-nanomaterial afika ezinhlobonhlobo eziningi. Zingaba nobuciko obuphezulu kakhulu obuyi-1: 1,000,000 (isib. Ama-nanotubes) noma ukuma okuphelele. Ngaphandle kwama-tubes nama-spheres, ama-nanoparticles anesimo sezinduku, izintambo, ama-whiskers, ama-nanoflowers, ama-fiber, ama-flakes namachashazi.
Ubukhulu nokuma kwe-nanoparticles kudlala indima ebalulekile mayelana nezakhiwo ze-NP ezifana namandla okuqina, ukuguquguquka kwemvelo, i-thermomechanical, i-conductive, i-dielectric, i-magnetic, ne-optical properties. Ukuze unikeze lezo zinto zokusebenza zibe izingxenye, ama-NP kufanele ahlakazeke futhi afakwe ngokufanayo ematrix. Ukuze uthole ukuhlakazeka kwekhwalithi ephezulu, i-ultrasonication iyindlela yokusabalalisa ethandwayo.
Ama-nanoparticles asebenzayo kagesi asetshenziselwa ukunikeza ama-inki nokugqoka amandla okuqhuba kagesi. I-Nano-isiliva (i-nano-Ag) ingenye yama-nanofillers asetshenzisiwe kakhulu kuma-inks aqhubayo. Ama-ink asebenzayo esiliva angenziwa njengama-inks aphethwe ngamanzi futhi aphrintiwe kwesikrini, okungahambisani nokuguquguquka nokuqina.
Ama-inks okuqhubayo ama polymers aqhubayo (polyaniline, polythiophene noma polypyrroles, njll), engasetshenziswa nge-ink-jet yokunyathelisa, ukugqoka okwenziwe nge-inkinobho, njll. Amakhokheni ajwayelekile e-electro-conductive angenziwa ngezigaba ezintathu ezihambisana nezinsimbi zazo ezihamba phambili kungaba izinsimbi ezihloniphekile, amapolym conductive, noma carbon nanomaterials. Ama-inki aqhubayo afana nobubanzi obubanzi besicelo futhi asetshenziselwa ukukhiqiza ama-electronics, amaphakheji (ama-PET namafilimu eplastiki), izinzwa, izintambo, amathegi we-RFID, izikrini zokuthinta, izibonisi ze-OLED, ama-heaters ashicilelwe kanye nabanye abaningi.
I-PEDOT: I-PSS [poly (3,4-ethylenedioxythiophene) poly (styrenesulfonate)] ingenye yama polymers aqhutshwa kakhulu, ahlinzeka ngaphandle kokusebenza kwawo okuphezulu ukubonakala okubonakalayo. Ngokufaka inethiwekhi ye-carbon nanotubes, i-nanowires yesiliva kanye / noma i-graphene, ukuqhutshwa kwe-PEDOT: I-PSS ingathuthukiswa kakhulu. I-PEDOT eguquliwe: ama-inks we-PSS kanye namafomula atholakala ngezinqubo ezahlukene zokugqoka nokunyathelisa. I-PEDOT esekelwe ngamanzi: Ama-inks e-PSS asetshenziselwa kakhulu ukugqoka, isistimu ye-flexography, i-rotogravure ne-inkjet.
Izinkinobho zokugqoka kanye nezembatho ziyi-electrical non-conductive futhi zisetshenziselwa ukuphrinta kwesikrini kwamabhodi wesifunda e-elektronike ukuze zakhiwe ungqimba oluvikela ukuvikela nokuthuthukisa izinto zokuqhuba.
Ama-nanoparticles amakhemikhali asetshenziselwa ukunikeza ama-inks, ama-pastes nokugqoka amandla okuvimbela.
Ultrasonic benki-top izibuko